Wax Soosaar Intee Le' eg Ayaa Sanadka 2008TI Laga Filayaa Gobolka Shabeele - Cakaara News
Wax Soosaar Intee Le' eg Ayaa Sanadka 2008TI Laga Filayaa Gobolka Shabeele
Beercaano (CN) Sabti,Nov 07 2015 ,Sida lawada ogyahay, mashruuca waraabka Galbeeka Shabeele oo horay loo odhan jiray mashruuca Galbeedka Godey ayaa 5tii sano e u danbaysay ay xukuumada maanta jirta xoogga saartay.
Xukumada DDSI ayaa si adag uga shaqay siisay, iyadoo galisay maan cilmiyaysan ,miisaaniyad gooni u ah,qalab casri ah iyo shaqaale ku takhasusay culuumta wax soosaarka beeraha . Balse wixii 5ta sano ka horeeyay mashruucu magac ahaan ayuu u jiray, waxse shaqo ah oo la taaban karo ma jirin.oo wuxuu ahaa howlgab.
Hadaba isku xidhaha Xafiiska Waraabka Iyo Hormarinta Dooxooyinka DDSI u jooga mashruuca oo shabakada cakaara uga waramay waxqabadka mashruuca ayaa sheegay in dibu dajin lagu sameeyay Gobolka Shabeele qoysas dhan 77,784 laga bilaabo 2003TI ilaa bilowga sanadkan 2008TI iyadoo qoysaska la dajiyayna loo qaybiyay dhul dhan 77,784 hektar. Waxaa intaa dheer,Matooro tiradoodu gaadhayso 3,613, Shidaal joogta ah, Abuurka xulka ah iyo khabiirada DA'ga oo goob joog u ah inay caawiyaan xoolo dhaqato beeralayda barista nidaamka casriga ah ee tabaca beeraha.
Dhamaan qoysaska la dajiyay ayaana si aan kala go’ lahayn goobtooda ugu hela dhamaan adeegyada aas aasiga ah sida Waxbrashada, Biyaha, Beeraha Iyo Caafimaadka intaba.
Wax soosaarka Gobolka Shabeele ayaa sanadihii ugu danbeeyay gaadhay 1,867,850 oo kiintaal oo isugu jira Sisinta gaar ahaan Sinsinta Cad, Basal,Galay, Hadhuudh Yaryare, Qaji, Bariis, Muus, Babaay, Canbe, Liin Dhanaan, Digir, Lows, Yaanyo IWM.
Hadaba su aashu waxay tahay wax soo saar intee le e'g ayaa laga filayaa gobolka shabeele sanadkan 2008TI ? maadaama 200 Oo Cagacagaf oo xukuumada DDSI dhawaan u qaybisay shacabka degaanka iyadoo ku dhiiri galinaysa in dhulka wax lagala soo baxo oo intooda badan wakhti xaadirkan shaqada kaga jira mashruuca galbeedka kuwii kalana ay isla shaqadan un kaga jiraan geesaha kala duwan ee deegaanka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeele Mudane Farxaan Cabdi oo aanu waydiinay su aashaas ayaana kaga jawaabay in wax soosaarka dhinaca beeraha ee laga filayo Gobolka sanadka 2008TI uu ugu yaraan noqon doono laba jibbaarka wax soosaarka sanadkii ugu danbeeyay oo ahaa 1,867,850.Wuxuuna intaa raaci yay, in maadaama oo xukuumada dalka iyo ta deegankuba xooga saareen qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha ee wareega labaad in la kordhiyo dhoofinta wax soosaarka dalka si dhaqaalahenu sare ugu koco, qorshihii lagaga midha dhalin lahaana la sameeyay oo shacabku qayb ka ahaa in shacabka deegaanka gaar ahaan ka Gobolka Shabeele ay ka go'antahay kor u qaadida tabaca beeruhu iyadoo xukuumaduna garab taagan tahay.
Ugudanbayna,mashruuca waraabka galbeedka shabeele oo dadaalo xoogan ugu jira hirgalinta qorsha yaasha u yaala bilowga sanadkan beeray 1,250 hectar iyadoo qorshaha sanadku ahaa in labeero 3,600 hectar ayaa 2,350 hectar ee hadhay diyaarintii lagu jiraa.
sidoo kale dhulbeereed dhan 350 hectar oo lasiiyay shirkadaha kala ah kulmiye iyo wadani na waxay hirgaliyeen 150 hectar meesha 200 ee hadhayna beeradii kusocoto.